သူသူ”(စဆုံး) – Grab Love Story
မိန်းမငယ်လေး တစ်ယောက် ထမိန် ရင်လျှားဖြင့် အဝတ် လျှော်ဖွတ်နေသည်။ သူမသည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးကာစ။ အပျိုပေါ် ဝင်စ ဖြစ်လင့်ကစား၊ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဖွံ့ထွားလှသည်။ သူမ အသက် 10 နှစ် မပြည့်မှီကပင် မိဘနှစ်ပါးစလုံး ဆုံးပါး သွားသဖြင့်  အဒေါ် တစ်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်သူမှ ခေါ်ယူ မွေးစားထားသည်။ အဒေါ် ဖြစ်သူ၏ လင်မယားမှာလည်း လက်လုပ် လက်စားများ ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်း မနေခဲ့ရပေ။ ငယ်စဉ်ကပင် အခြားသူများ၏ လက်တို လက်တောင်း ခိုင်းသည်များ လုပ်ကိုင်ရင်း အဒေါ်ဖြစ်သူအား တစ်ဖက် တစ်လှမ်းမှ ကျေးဇူး စပ်ပေးခဲ့သည်။ ပန်းရံ၊ လမ်းလုပ်၊ စသဖြင့် ကြုံရာ ကျပန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သောကြောင့်  နေလောင်ထားသဖြင့် ညိုသော အသားအရည်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖွံ့ထွား ကျစ်လစ်လှသည်။ သူမ နာမည်က သူသူ။
အဝတ်အစားများ ရိုက် လျှော်လိုက်တိုင်း လှုပ်ရမ်းသွားသည့် ရေစိုနေသော ထမိန် ပါးပါး အောက်မှ တင် ကားကား ကြီးများကို အငမ်းမရ ကြည့်ရင်း တံတွေး မျိုချနေသူ တစ်ယောက် ရှိသည်။ သူသူ့ အဒေါ် မနှောင်း၏ ယောက်ျား ညိုထွန်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဒီကောင်မလေး ဒီလောက် လှသည်ကို သတိ မပြုမိ။ အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း ဖွံ့ထွားလာသော ခန္ဓာကိုယ် အရှိုက် အဟိုက်များက ညိုထွန်းအား ညှို့ယူနေလေပြီ။ လွန်ခဲ့သော 8 နှစ်ခန့်က ဒီကောင်မလေးအား မနှောင်း အိမ်သို့ ခေါ်လာချိန်တွင် မနှစ်မျို့ခဲ့သော်လည်း ယခု အခါတွင် ကျားချောင်း ချောင်းနေသည်။
ညိုထွန်း ရေချိုးကန်အနီး ကပ်သွားကာ
“သူသူ ဦး ဘာကူလုပ်ပေးရမလည်း အဟဲ”
ဦးညိုထွန်း၏ အသံ ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရ၍ သူသူ လန့်ကာ နောက်လှည့် ကြည့်သည်။ သူမ ခန္ဓာကိုယ်အား ဝါး စားမတက် အနီးကပ်ကြည့်နေသော ဦးညိုထွန်း၏ တဏှာ မျက်လုံးများနှင့် ဆုံမိသည်။ ဦးညိုထွန်း၏ အကြည့်တွေက ရင်လျှားထားသည့် ထမိန် အောက်မှ ရုံးကြွနေသော ရင်သားနှစ်မွှာက မခွါပေ။ သူသူ ရင်ဘက်အား လက်ဖြင့် ရှပ်ကာလျှက်
“အို ဦးညို ရတယ် မလိုပါဘူး”
“အော် အေးအေး သူသူ လိုအပ်ရင် ပြောနော။ ဦးညိုက သူသူ ပင်ပန်းနေတာ မကြည့်ရက်လို့ အဟဲ”
“ရတယ် ရတယ် မလိုဘူး ဦးညို”
“ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါဘဲလေ ဟဲဟဲဟဲ”
သူမအား ဝါးစားမတက် ကြည့်ကာ တဟဲဟဲဖြင့် လှည့်ထွက်သွားသည်။ ထိုတော့မှ သူသူ သက်ပြင်း ချနိုင်သည်။
ရေချိုးအပြီးတွင် အဒေါ်လည်း ပြန်မလာသေး၍ သူသူ သူမ၏ သူငယ်ချင်း မေဦး ထံသို့ ထွက်ခဲ့သည်။ မေဦး ဆိုသည်မှာလည်း နွမ်းပါးသည့် မိသားစုအား သူမနှင့်အတူ ကျပန်း လုပ်ရင်း ရှာဖွေ ပေးနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေက ပါးသဖြင့် အဒေါ်ကိုလည်း ပိုက်စံ မအပ်နိုင်သည်က တမျိုး၊ ဦးညိုထွန်း၏ ရိတိတိ အပြုအမူများကို ရှောင်နေရ သည်က တမျိုးကြောင့် သူသူ စိတ်ညစ်နေသည်။ မေဦးတို့အိမ် ရောက်သော် အိမ်ရှေ့တွင် ကားတစ်စီး ရပ်ထားသည်ကို တွေ့သည်။ အိမ်ထဲမှ ခေတ်ဆန်ဆန် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထွက်လာကာ မေဦးအား နှုတ်ဆတ်ပြီး ကာပေါ် တက်ကာ ကားမောင်း၍ ထွက်သွားသည်။
“ဟယ် သူသူ လာ အိမ်ပေါ်တက်”
“ဒါနဲ့ နေပါဦး စောနက ဘယ်သူလည်း”
“အဲ့ဒါ အရင်က ဟိုဘက် ရပ်ကွက်မှာ နေတဲ့ မဆွေ လေ၊ အမေ့ တူမ တစ်ဝမ်းကွဲပေါ့၊ နင် သိပါတယ်ဟာ”
“ဟယ် မဆွေ ဟုတ်လား သူက ဘယ်လိုက ဘယ်လို ကားတွေ ဘာတွေနဲ့ ဖြစ်သွားရတာလည်း”
“အင်းးးး သူ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ အဆိုတော် လုပ်နေတာလေ။ အခုတော့ အဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မယားငယ် ဖြစ်ပြီး ထောနေတာ”
“ဒါနဲ့ ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလည်း”
“ငါ့ အမေ နေမကောင်းဘူး ဆိုလို့ ဆေးဖိုးလေး လာပေးရင်းနဲ့ လာတာ၊ ငါ့ကိုလည်း အဲ့ ဆိုင်မှာ လုပ်မလားတဲ့၊ အဲ့ဒီမှာလုပ်ရင် ဝင်ငွေ ကောင်းတယ် တဲ့”
“အေးလေ အခုရက်ပိုင်း အလုပ်မှ မရှိတာ၊ ငါလည်း လုပ်မယ် ပြောလိုက်တာပေါ့”
“ဟယ် နင်ကလည်း ငါ့ကျ ပြောမပေးဘူး”
“အေးပါ သူသူရယ် ငါ အရင် လုပ်ကြည့်လို့ အစဉ်ပြေရင် နင့်ကို ပြောပေးမယ် စိတ်ချ”
“ကောင်မ နင် အစဉ်ပြေရင် ငါ့ကို မမေ့နဲ့နော်”
“စိတ်ချ သူသူရေ စိတ်ချ၊ နင်သာ သီချင်းအဆို ကျင့်ထား”
မေဦး အလုပ်ဝင်သည်မှာ နှစ်ပတ်ခန့် ရှိပြီ။ နှစ်ပတ် အတွင်းလည်း သိသိသာသာ ပြောင်းလည်းလာသည်။ အလုပ် စဝင်ကာစ အလုပ်မှ ကြိုထုပ် ငွေဖြင့် အလှကုန် ပစ္စည်းများ အဝတ် အစားများ ဝယ်ကာ အလှပြင်ထား၍ တော်တော် ကြည့်ကောင်းနေသည်။ ညပိုင်း 12:00 ကျော်မှ အိမ်ပြန်ရသည်က လွဲ၍ ငွေရေး ကြေးရေးလည်း အရင်ကထက် အနည်းငယ် ချောင်လည် လာသည်။
“သူသူရေ ငါတို့ဆိုင်က လူ အသစ်တွေ ထပ်ခေါ်မှာ၊ နင် လုပ်မှာလား”
“အေး လုပ်ခြင်တယ်ဟာ၊ ဒါနဲ့ ဘာတွေ လုပ်ရတာလည်း”
“အော် နင်ကလည်း၊ စဉ်ပေါ်တက်ပြီး သီချင်းဆိုရုံလေးရယ်၊ နင် ဆိုတာ သဘောကျပီး ပန်းကုန်း ဆွတ်တဲ့ ဧည့်သည်နား သွား ထိုင်ပေးရုံလေးရယ် ဒါဘဲ”
“အဲ့ဒါဆို ငါ လုပ်မယ်ဟာ”
“အေးပါ ဒါဆို မနက်ဖန် နင် ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့”
“အေးအေး ကျေးဇူးပါ မေဦးရယ်”
သူသူ့ ရင်ထဲ အပျော်တွေ ပြည့်နေ၏။ သူမ အလုပ်လုပ်ရင်း အဒေါ့် မိသားစုအား ထောက်ပန့်မည်။ ပြီးလျှင် သူမ ဘဝ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း လုပ်မည်။ ဒါဆိုလျှင် သူမအား ကျားချောင်း ချောင်းနေသော ဦးညိုထွန်း၏ လက်မှ လွတ်ကင်းမည်။
သူသူ စင်တင် တေးဂီတ၌ အလုပ် ဝင်ကာစ အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိခဲ့သည်။ မီးရောင် အောက်၌ လူအများရှေ့ သီချင်း တက်ဆိုရာတွင် အစပိုင်း ထစ်ထစ် ငေါ့ငေါ့ ရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အစဉ် ပြေသွားသည်။ ဧည့်သည်များနှင့် ထိုင်၍ စကားပြောရာတွင်လည်း အစပိုင်းတွင် ခက်ခဲခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ပြောဆိုဖန် များလာတော့ အစဉ်ပြေလာ၏။
သူသူ အလုပ်ဝင်ပြီး 1 လခန့် အကြာတွင်
ဆိုင်သို့ ရောက်ရောင်ခြင်း မန်နေဂျာ ခေါ်သဖြင့် မေဦး မန်နေဂျာ့ အခန်းသို့ သွားခဲ့သည်။ သူသူတို့ကတော့ အလှ ပြင်ကာ သီချင်းဆိုရန် ပြင်စဉ်နေကြသည်။ 1 နာရီခန့် ကြာသော် မေဦး မန်နေဂျာ့ အခန်းမှ ခေါင်းငိုက်စိုက်၍ ထွက်လာသည်။
“မေဦး မျက်နှာလည်း မကောင်းဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်း”
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး သူသူရယ်၊ ငါ ဒီနေ့ည အိမ်ပြန်ဖြစ်ခြင်မှ ပြန်လိမ့်မယ်၊ မနက်ကျရင် အမေ့ကို ဒီပိုက်စံနဲ့ ဆေးခန်း ပို့ပေးဟာ”
“ဟင်!!! မေဦး အန်တီ ဘာဖြစ်လို့လည်း၊ ပြီးတော့ နင်က ဘာ လုပ်မလို့ အိမ်မပြန်ဖြစ်မှာလည်း”
မေဦး မျက်ဝန်းထဲမှ မျက်ရည် အချို့ ကျလာသည်။ မေဦး ချက်ခြင်း ပြုံးကာ
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး သူသူ၊ ငါ ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးပါနော် သူငယ်ချင်း”
မေဦး သူသူ့ လက်ထဲ ပိုက်စံ တအုပ် ထဲ့ပေးကာ ဆိုင် အနောက်ဘက်သို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ သူသူ ပြေးလိုက်မည် အလုပ်
“ယခုတဖန် ဖျော်ဖြေမည့် တေးသံရှင် ကတော့ သူသူ ဖြစ်ပါတယ် ခင်များးး”
သူသူ State စဉ်ပေါ်သို့ တက်ခဲ့ရသည်။
မေဦးတစ်ယောက် အမေ့ မျက်နှာအား မြင်ယောင်ရင်း taxi ကား ခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ခဲ့သည်။
“နင့် အမေကို ဆေးကုဖို့ ပိုက်စံ လိုတယ်လေ။ နင့် အမေကို မသနားဘူးလား၊ နင့်ရဲ့ အပျိုစဉ် ဘဝလေး ဒီတစ်ည ပေးစပ်ရုံနဲ့ နင့်အမေကို ဆေးကုဖို့ ပိုက်စံ လုံလောက်ပြီ”
မဆွေ၏ စကားများ ကြားယောင်ရင်း မျက်စိကို မှိတ်လိုက်ရာ မျက်ရည်ပေါက်များ ကျလာသည်။
ကားရပ်လိုက်သည့် အသံ ကြားမှ မေဦး သတိဝင်ကာ ဘေးဘီကို ကြည့်မိသည်။ မီး ထိန်ထိန် လင်းနေသည့် တိုက် တစ်လုံး ရှေ့တွင် ကားရပ်ထားသည်။ ကား တံခါးအား တစ်ယောက် ဖွင့်ပေးသဖြင့် မေဦး ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ တံခါး ဖွင့်ပေးသူ နောက်သို့ မေဦး အသက် မဲ့စွာ လိုက်ခဲ့သည်။
“ဟားးးး အချောလေးဘဲကွ OK OK မင်းတို့ တာဝန်ကျေတယ်”
“ကျေးဇူးပါ ဆရာကြီး၊ ကဲ ကောင်မလေး ငါတို့ ဆရာကြီး စိတ်တိုင်းကျ ပြုစုပေးလိုက်နော”
အခန်း အကျယ်ကြီး တစ်ခုထဲတွင်
မေဦးနှင့် ထို လူကြီး နှစ်ဦးသာ ကျန်ခဲ့သည်။
“လာလေ ကောင်မလေး ဒီမှာ ထိုင်”
ဆိုင်ထဲတွင် အခြား အမျိုးသားများနှင့် ထိုင်နေကြ ဖြစ်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ နှစ်ဦးတည်း ထိုင်ရမည့်အရေး မေဦး တွန့်နေသည်။ သို့သော် သူမ ဒီအထိ လိုက်လာသည့် အကြောင်းမှာ ဘာကြောင့်ဟု ပြန်တွေးမိချိန် ထို လူကြီး နံဘေးတွင် ထိုင်မိလျက်သား ဖြစ်နေသည်။
“ရော့ ဒါလေး သောက်လိုက်”
မေဦး လက်ထဲ ရောက်လာသော ဖန်ခွက်အား တစ်ချက် ကြည့်ကာ မော့ချလိုက်သည်။
ရင်ထဲ ပူ ဆင်းသွားသည်။ လူကြီးက သူမ ပုခုံးအား သိုင်းဖက်ရင်း နောက် တစ်ခွက် ထပ်တိုက်သည်။ မေဦး မော့ချလိုက်ပြန်သည်။ သူမ ခေါင်းထဲ ရီဝေဝေ ဖြစ်ကာ မျက်လုံး အမြင်များ ဝေဝါးလာသည်။ ထို လူကြီးက သူမအား ဖက်ထားရင်း ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေသော မျက်နှာမှာ နှစ်ထပ် ဖြစ်နေသည်။
မေဦး မူးသွားပြီ။ သူမ ခန္ဓာကိုယ် လေထဲ မြှောက်သွားသကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရသည်။ ပြီးနောက် ကျောပြင်က အိစက် ညက်ညောသော အထိအတွေ့ကို ခံစားမိသည်။ သူမ မွေ့ယာပေါ် ရောက်သွားပြီ။
ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပုရွက်စိတ်များ တက်နေသကဲ့သို့ ခံစားရသည်။ ပြီးနောက် လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေ အပေါ်ကို မြောက်လိုက် ကျလိုက် ဖြစ်သွားသည်။ တကိုယ်လုံး အေးစက်သော Air con ၏ အထိအတွေ့ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မေဦး ကိုယ်ပေါ်၌ အဝတ်အစားများ မရှိတော့ပေ။
လူကြီးက မေဦး၏ နို့အုံအား လက်ဖြင့် ဖိချေ ပွတ်သပ်နေ၏။
“ဟားးးး နို့လေးတွေက တင်းနေတာဘဲ”
မေဦး ကိုယ်လေး တွန့်သွားသည်။ ထို လူကြီး ချေ ကောင်းကောင်းဖြင့် ဖိချေနေရာ မေဦး နာကျင်သွားသဖြင့် မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ လူကြီး၏ လက်များက နို့အုံအား ချေလိုက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အား ပွတ်လိုက်ဖြင့် မေဦး မှာ နာကျင် ခံခက် ရှိလှသည်။ လက်က တဖြေးဖြေးဖြင့် ပေါင်သား၊ တင်ပါး များအား ပွတ်သပ်ရင်း စောက်ပတ်လေးသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ပါးစပ်က နို့သီးခေါင်းအား စို့ရင်း လက်ညိုးဖြင့် စောက်ပတ် အကွဲလေးအား ပွတ်သပ်နေသည်။ အပျိုဖြစ်ကာစ စောက်ပတ်လေးမှာ မို့မို့ ဖေါင်းဖေါင်း လေးဖြင့် ကိုင်လို့ ကောင်းလှသည်။ လက်ညိုးအား စောက်ပတ်ထဲ မထိုးသေးဘဲ စောက်စိလေးကို ပွတ်သပ် ပေးနေသည်။ အပျို ဖြစ်ကတည်းက ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်၏ အထိအတွေ့ကို အခံစားဖူးသေးသော မေဦး တစ်ယောက် ထို လူကြီး၏ အကိုင်အတွယ်တွင် မိန်းမော လာသည်။ ပါးစပ်လေးဟ၊ ခေါင်း မော့၍ တဟင်းဟင်း ညည်းညူ နေ၏။ စောက်စိအား ကလိပေးနေချိန် 10 mins ခန့် ကြာသော် စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်ကြည်များ ပစ်ချွဲချွဲနှင့် စိမ့် ထွက်လာသည်။ ခါးကို မသိမသာ ကော့ကော့ လာသည်။ လူကြီး သဘောကျစွာ ပြုံးမိသည်။ အပျိုစင်
တစ်ယောက်အား စိတ်တိုင်းကျ နှိုးစွပြီး သူ ကြမ်းခြင်သလို ကြမ်းတော့မည်ကို ကောင်မလေး မသိရှာပေ။
“အအအ ဟင်းးး ကျွတ်စ်”
လိုခြင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာသည်။
အဝတ်အစားများ ချွတ်ကာ ကောင်မလေး ပေါင်ကြားတွင် ဒူးတုတ် ထိုင်လိုက်သည်။ ထို လူကြီး၏ လီး အား မေဦး မြင်လိုက်လျှင် လန့်ဖြန့်ကာ အမူးပင် ပြေသွားနိုင်သည်။ သို့သော် အရက် မူးနေသော မေဦး တစ်ယောက် လူကြီး၏ အကိုင်အတွယ်များကြောင့် မျက်လုံး မှေးစင်းကာ လူကြီး၏ လီးကို မမြင်နိုင်တော့။
လီးကြီး၏ လုံးပတ်မှာ မေဦး လက်ဖျံခန့် တုတ်၍ 7″ ခန့် ရှည်လျှားသည်။ လီး ဒစ်သည်လည်း ဂေါက်သီးလုံးခန့် ရှိသည်။ ထိုလူကြီး၏ နာမည်ကား ဦးတိုက်မောင်း။ အသက်က 50 ဝန်းကျင်ခန့် ရှိသော်လည်း အနု အရွ ဖူးသစ်စလေးများကိုသာ ငွေ ပုံပေးပြီး စားနေသဖြင့် နုပျို သန်စွမ်းနေသည်။
သူ၏ လီး ဒစ်ဖြင့် မေဦး စောက်ပတ် အကွဲလေးအား အထက် အောက် ပွတ်တိုက်ရင်း တစ်ချက် တစ်ချက် စောက်စိလေးအား ခလုပ်တိုက်မိသည်။ သူမ အလိုးခံရတော့မည်၊ အပျိုရည် ပျက်တော့မည် ဟူသော အသိစိတ်၊ သူမ စောက်ပတ်လေးအား ယောက်ျား တစ်ယောက်၏ လီးဖြင့် ထိတွေ့နေသည် ဟူသော စိတ်၊ မကြာမီ ထို လီးက သူမ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်တော့မည် ဆိုသော စိတ်များဖြင့် မေဦးတစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားကာ စောက်ပတ်ထဲ ယားကျိ ယားကျိဖြင့် အရည်ကျည်များ စိမ့်စိမ့် ထွက်လာသည်။
ဦးတိုက်မောင်း လီးဒစ်အား စောက်ပတ် အကွဲလေးတွင် တေ့လိုက်သည်။
မေဦး ခေါင်းမော့၊ လက်သီး စုပ်ကာ အံကြိတ်လိုက်ပြီး လီးကြီး တိုးဝင်လာမည့် အချိန်ကို စောင့်နေမိသည်။ သူမ၏ ခြေထောက် နှစ်ဖက် လေပေါ် မြောက်သွားကာ ဦးတိုက်မောင်း ပုခုံးထက် ရောက်သွားသည်။ စောက်ပတ် အကွဲလေး ဟ လာသည်။ ဦးတိုက်မောင်း စောက်စိလေးအား လက်မဖြင့် ပွတ် ခါ ပေးလိုက်ရာ
မေဦး ဖင်လေး ကြွလာသည်။
လီးဒစ်အား တံတွေး သုပ်ပြီး စောက်ပတ် အပေါက်တွင် တေ့၍ ခါးကို ဆက်ကနဲ ဖိချလိုက်သည်။
“အင့်!!!! ပျိပျိ ဗျစ်ဗျစ် အားးးး အမေရေ့”
စောက်ပတ်ထဲ ရုတ်တရက် ဝင်လာသော ပြောချောချော မာတောင်တောင် အရာကြောင့် မေဦး လန့်၍ အော်သည်။ လီးဒစ် မြုပ်ရုံသာ ဝင်သေးသည်။ ဦးတိုက်မောင်း ထပ်၍ ဖိတိုးလိုက်သည်။
“ဗျိဗျိဗျိ ဇွိ အားးးးးဟားးးဟားးး”
လီးနှင့် တကြိမ်မျှ မတွေ့ဘူးသေးသော စောက်ပတ်လေးမှာ လီး ဒစ်အား ချက်ခြင်း အဝင်မခံဘဲ တားစီးထားသည်။ ဦးတိုက်မောင်း ပြုံးလိုက်သည်။ မကြာခင် သူ လိုခြင် ကြားခြင်သော မိန်းမငယ်လေး တစ်ဦး၏ နာကျင်စွာ အော်ညည်းသံကို ကြားရတော့မည်။ လီး ဒစ်ကလည်း စောက်ပတ် အပေါက်တွင် တေ့မိနေပြီ။ မေဦး၏ ခြေထောက်များအား မေဦး မျက်နှာနှင့် ထိခါနီးအထိ ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ခါး အားကို သုံးကာ ဖိချလိုက်သည်။
“အင့် ဗျိဗျိဗျိ ဗျစ် အားးးးး အမလေးးး လေ နာတယ် နာတယ် မရဘူးးး အီး ဟီးဟီးဟီးးးးးး”
မေဦး ထိုလူကြီး ရင်ဘက်များအား တွန်းကာ အော်နေသည်။ လီးကြီးက စောက်ပတ်ထဲ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့်သာ ဝင်သေးသည်။ လီး အဝင် လမ်းကြောင်း တည့်သွားသဖြင့် ဦးတိုက်မောင်း နောက်တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လိုး ထဲ့လိုက်သည်။
“အင့်!!! ဗျိဗျိဗျိ ဗျစ် အူးးးဟူးးဟူးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အီးဟီးဟီးဟီး နာတယ် နာတယ်”
မေဦး ခေါင်း ခါရမ်းကာ မျက်ရည်များ ဖြိုင်ဖြိုင် ကျရင်း ငိုညည်းနေသည်။ လီးကြီးမှာ အပျိုမှေးအား ရက်စက်စွာ ထိုးခွဲရင်း သားအိမ်ခေါင်းထိ ရောက်သွားသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလည်း အနည်းငယ် ကွဲသွားသည်။ ဦးတိုက်မောင်း လီးကို အဆုံးထိ ထုတ်ကာ အားရပါးရ ပြန် စောင့်ထဲ့လိုက်သည်။
“ဗျွတ် ဗျွတ် ဗျွတ် ဗျိ အူးးးးးး အမေရဲ့ နာတယ နာတယ် အီးဟီးဟီးဟီး”
မေဦး ဖင်ကြီးအား ကော့ ရမ်းကာ အော်ဟစ် ရုံးကန်နေသည်။ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လာသော လီးကြီးမှာ ညှာတာမှု မရှိပေ။ သောက်ထားသော အရက် အရှိန် ပျောက်ကာ ချွေးစီးများ ကျလာသည်။
“ဗျွိဗျွိ ဗျိ ဒုတ် အီးဟီးးဟီးဟီးးးး ဗျွတ်ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ် အူးးးဟူးးးဟူးးးဟူးး အမလေးလေ အမေရဲ့”
မေဦး အော်သံ ကြားရလေ လိုးရတာ အရသာ ရှိလေဖြင့် ဦးတိုက်မောင်း မညှာမတာ လိုးနေရာ လီး တစ်ချောင်းလုံး မေဦး စောက်ပတ်မှ ထွက်သော သွေးများ နီမြန်းနေသည်။ လီးကြီး စောင့် ဝင်လာတိုင်း မေဦးမှာ နာကျင်လွန်းသဖြင့် ကမ္ဘာ ပျက်မတက် အော်ဟစ်နေရသည်။ ဦးတိုက်မောင်း မှာဖြင့် အရသာ တွေ့လို့။
“ဟားးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်လေးကွာ”
ထို တစ်ညလုံး မေဦး နာကျင်စွာ အော်ဟစ် ညည်းညူရင်း ဦးတိုက်မောင်း၏ စိတ်တိုင်းကျ လိုးခြင်းကို လှိမ့် ခံနေရသည်။ ဦးတိုက်မောင်း တစ်ညလုံး လိုးထား၍ မေဦး နေ့လည် 11:00 am ခန့်မှ ထနိုင်သည်။ စောက်ပတ် တခုလုံး ထူပူ ကြိမ်းစပ်ကာ သားအိမ်လည်း အောင့်နေသည်။
မေဦး တစ်ယောက် ဦးတိုက်မောင်း စီစဉ်ပေးသော taxi ဖြင့် လက်ထဲတွင် ဦးတိုက်မောင်း နောက်ထပ် ပေးလိုက်သော ပိုက်စံအား ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စုပ်ကိုင်လျှက် အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့တွင် လူ အများ စုဝေးနေကြသည်။
“ဟင် ဘာ ဘာလုပ်နေကြတာလည်း”
“မေဦး နင် ဘယ်တွေ သွားနေတာလည်း၊ နင့် အမေ မရှိတော့ဘူး”
“ရှင် အမေ အမေ ဘာဖြစ်တယ်”
မေဦး အိမ်ရှေ့မှ လူများ၏ စကားကို နားမထောင်နိုင်တော့ဘဲ အိမ်ပေါ် ပြေးတက်ခဲ့သည်။ ဘုရားစဉ် ရှေ့တွင် ဆောင်ခြုံထားသော မိခင်၏ အလောင်း၊ ပြီးလျှင် တရှုံ့ရှုံ့ ငိုကြွေးနေသော သူငယ်ချင်းမ သူသူ။
“သူသူ ငါ့အမေ ဘာဖြစ် ဘာဖြစ်”
သူသူ မေဦးအား ထဖကျကာ
“အီးဟီးဟီး မေဦးရေ မနေ့က ငါ ဆိုင်က အစောကြီး ပြန်လာပီး နင့် အမေကို ဆေးခန်း ပို့ဖို့ လုပ်တာ၊ ငါ ရောက်တော့ နင့် အမေ ဆုံးဘီ မေဦးရဲ့ အီးဟီးဟီးဟီး”
“ဘာ!!!!သူသူ!!!!! အမေ!!!! အမေ!!!!”
မိခင်၏ ရက်လည် ပြီးမှ မေဦး အလုပ် ပြန်ဆင်းဖြစ်သည်။ သူသူလည်း နာရေး ကိစ္စ တလျှောက်လုံး မေဦးအား ကူညီ လုပ်ကိုင် ပေးခဲ့သည်။ မေဦး မိခင်ကြီး တိမ်းပါးသွားသည့် နောက်ပိုင်းတွင် မောင်ငယ်နှင့် ညီမငယ်၏ တာဝန်က မေဦး ပုခုံးပေါ် ရောက်လာခဲ့ပြီ။ သူတို့လေးတွေ ပညာတက် ဖြစ်ဖို့ မေဦး တာဝန် ဖြစ်သွားသည်။ သို့ပါ၍ မေဦးတစ်ယောက် ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် ပိုက်စံ ရှာရမည်။
“မေဦး ဒီနေ့ night လိုက်မလား”
“ဘယ်လောက် ရမှာလည်း ဂျာကြီး”
“Foreigner တွေဟ၊ ဦးတိုက်မောင်းရဲ့ partner တွေ၊ ပါကင်မဟုတ်ရင် ပါကင် အကျ သန့်သန့် လေး ရှာပေး ဆိုလို့ နင့်ကို မေးကြည့်တာ”
“Foreigner တွေ ဆိုတော့ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်လည်း”
“နှစ်ယောက် သုံးယောက် ပေါ့ဟာ”
မေဦး တစ်ချက် စဉ်းစားသည်။ Foreigner တွေ ဆို၍ လန့်မိသည်။ သို့သော် မိမိအား ပါကင် ဖွင့်ထားသည့် ဦးတိုက်မောင်း၏ လီး ထက်တော့ ကြီးစရာ မရှိလောက်ဟု ထင်မိသည်။
“ပါကင် ဆို5ပုံး၊ ပါကင် မဟုတ်ပေရင်3ပုံးတဲ့၊ သူတို့ ကျေနပ်ရင် ထပ်ပေးလိမ့်မယ်”
“Ok လေ၊ အဲ့ဒါဆို မနက်ဖန် မနက်ပိုင်း ဆိုင်ကို လာခဲ့၊ ငါ့ အတွက်တော့ 10% ပေါ့”
မေဦး ရေချိုးပြီး 9:00 am ခန့် ဆိုင်သို့ ထွက်ခဲ့သည်။ သူသူ အားလည်း သွားစရာ ရှိ၍ ဟု မှာကြားခဲ့သည်။ ဆိုင်သို့ ရောက်ပြီး နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် ဦးတိုက်မောင်းနှင့် foreigner နှစ်ဦး ရောက်လာသည်။ ဦးတိုက်မောင်းက မေဦးကို တွေ့သော အခါ သူ အားရပါးရ ပါကင် ဖွင့်ခဲ့သော မိန်းကလေး ဖြစ်နေ၍ သဘောကျသွားသည်။ KTV တစ်ခန်း ယူကာ2section ခန့် သီချင်းဆို ဘီယာ သောက်ကျသည်။ 12:00 pm ထိုးသော် KTV ကျသင့်ငွေနှင့် မေဦး အတွက်ပါ မန်နေဂျာထံ ရှင်းခဲ့ပြီး မေဦးအား5star အဆင့်ရှိ hotel ကြီး တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မေဦး ဦးတိုက်မောင်း၏ လီးအား အနည်းငယ် လန့်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့် က ပါကင် ဖွင့်စဉ် မညှာအတာ အလိုးခံထားရသည်လေ။
ဦးတိုက်မောင်းတို့ သုံးဦး ဘီယာ သောက်ရင်း တဟီးဟီး တဟားဟားဖြင့် စကား ပြောဆိုနေကြသည်။ English လို ပြောနေကြသဖြင့် မေဦး နားမလည်ပေ။ သို့သော် သူမအား ကြည့်ပြီး ပြောနေသဖြင့် သူမ အကြောင်း ပြောမှန်းတော့ နားလည်သည်။ ဦးတိုက်မောင်း မေဦးအား ဘီယာ ခွက် ကမ်းပေးသဖြင့် လှမ်းယူကာ မော့လိုက်သည်။ မေဦး ဘီယာ နှစ်ခွက်ခန့် သောက်ပြီးသော်
“ချာတိတ်ရေ၊ မင်းကို သူတို့က သဘောကျနေကြတယ်၊ စကြစို့ တဲ့”
ဦးတိုက်မောင်း Foreigner နှစ်ဦးအား တစ်စုံတစ်ခု ပြောလိုက်ရာ နှစ်ဦးသား လက်မများ ထောင်ကာ မေဦး၏ ဘေး တစ်ဖက် တစ်ချက်စီတွင် ဝင် ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် တစ်ယောက်က မေဦး ပုခုံးအား ဖက်၍ မျက်နှာကို သူ့ဘက် ဆွဲ လှည့်လိုက်သည်။ နောက် တစ်ယောက်က မေဦး ပေါင်များကို ပွတ်သပ်လိုက်၊ နို့အုံကို အင်္ကျီ အပေါ်မှ ကိုင်တွယ်လိုက် လုပ်နေသည်။ တစ်ယောက်က မေဦး နှုတ်ခမ်းများအား စုပ်နမ်းနေစဉ် နောက်တစ်ယောက်က မေဦး ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ကာ ထမိန်နှင့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအား ဆွဲချွတ် လိုက်သည်။ မေဦးလည်း အလိုက်သင့် ပေါင် ကားပေးလိုက်သည်။
ပေါင်ကြားတွင် ဒူးထောက်နေသော တစ်ယောက်က ဦးတိုက်မောင်းဖက် လှည့်ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် မေဦး စောက်ပတ်လေးအား လက်ဖြင့် ဖြဲကာ လျှာဖြင့် လျှက်လိုက်သည်။
ပါးစပ်ထဲ ဝင်မွှေနေသော လျှာအား ပြန် ကလိပေးနေသည့် မေဦး ကိုယ်လေး တွန့်သွားသည်။ ပြန် ကလိပေးသော မေဦး၏ လျှာအား စုပ်ယူ ခံလိုက်ရသည်။ တချိန်ထဲမှာပင် စောက်ပတ်ထဲ လျှာဖြင့် ထိုးမွှေလိုက်၊ စောက်စိလေးအား စုပ်လိုက်ဖြင့် လုပ်နေရာ
“ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အွန်းးးးး အူးးးးးး”
မေဦး ခါးတွေ၊ ရင်တွေ ကော့လန်နေသည်။ ဦးတိုက်မောင်း ထိုင်ရာမှ ထလာကာ မေဦး၏ T-Shirt အင်္ကျီအား ရင်ညွန့်အထိ ပင့်တင် လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဘော်လီ ဂျိတ် များကို ဖြုတ်လိုက်ရာ ဟင်းချိုပန်းကန် အသေးခန့် လုံးဝန်း မာကျစ်သော နို့ များ ပေါ်လာသည်။ နို့ တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ပွတ်ချေကာ ကျန် တစ်ဖက်အား ပါးစပ်ဖြင့် စို့လိုက်သည်။
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အွန့် အွန့် အူးးးးး”
စောက်ပတ် လျှက်နေရင်း လက်ညှိုးက စောက်ပတ်ထဲ ထိုးမွှေနေရာ
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အူးးး အားးး ရှီးးး ဟားးးးးးးး”
အမျိုးသား သုံးယောက်၏ ပါးစပ်စုပ်၊ နို့ ကလိ၊ စောက်ပတ် ကလိခြင်းကို တပြိုင်နက်တည်း ခံရသဖြင့် မေဦး ကြာရှည်စွာ မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ထွက်ကာ တချီ ပြီးသွားရသည်။
“ကဲ ချာတိတ်ရေ၊ မင်းအလှည့်”
ဦးတိုက်မောင်း ပြောရင်း အဝတ်အစား များကိုချွတ်လိုက်သည်။ သူတို့ လီးများကို စုပ်ပေးရမည်မှန်း မေဦး သိလိုက်သည်။ Foreigner နှစ်ယောက်ပါ အဝတ်များကို ချွတ်လိုက်ရာ
“အို အမလေးလေ ဖုရား ဖုရား”
မေဦး လန့်သွားသည်။ Foreigner နှစ်ယောက်၏ လီးများမှာ ဦးတိုက်မောင်းနှင့် အရွယ်တူများ ဖြစ်ကြသည်။ မေဦး လိုက်လာမိတာ မှားပြီဟု တွေးမိသည်။ ဦးတိုက်မောင်း လီးတစ်ချောင်းထဲကိုပင် ငယ်သံပါအောင် အော်ခဲ့ရသည်။ လီး သုံးချောင်းဆိုလျှင် သူမ ခံနိုင်ပါ့မလား မသိပေ။ သို့သော် ပိုက်စံလည်း ယူပြီးမှ မထူးတော့ပြီ။ မတ်တပ် ရပ်နေသော သုံးဦးအကြား ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ ရှေးဦးစွာ သူမ စောက်ပတ်အား လျှက်ပေးသော သူ၏ လီးကို လက်ဖြင့် မရဲတရဲ ကိုင်လိုက်သည်။ မာတောင်၍ နေသော လီးကြီးမှာ လက်ဖြင့် မစုပ်မိပေ။ လီး အရည်ပြားအား လက်ဖြင့် ဆွဲလိုက်ရာ နီရဲ၍ အရည်ကြည်များ ထွက်နေသော ဒစ် ပြဲပြဲကြီး ပေါ်လာသည်။ လီး ဒစ်အား နှုတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်လိုက်သည်။
Foreigner အရသာ တွေ့သွားသည်။
အမျိုးသား သုံးဦး၏ လီးများကို 10 mins ခန့်စီ စုပ်ပေးပြီးသော်
“ကဲ ချာတိတ်၊ ကုတင်ပေါ် သွားစို့”
မေဦး မွှေ့ယာပေါ်တွင် ပတ်လပ်လှန် ပေါင်ကား ပေးထားလိုက်သည်။ Foreigner တစ်ယောက်က မေဦး ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ကာ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်း တင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် လီး ဒစ်အား စောက်ပတ်တွင် တေ့ကာ ခါးကို ဖိချလိုက်သည်။
“ဗျိဗျိဗျိ ဗျစ် အားးးး အမေရဲ့ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်”
အရည်များ ရွှဲနေသော စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီး မဆန့်မပြဲ တိုးဝင်သွားသည်။ မေဦး လက်နှစ်ဖက်က မွေ့ယာခင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စုတ်ကိုင်ထားသည်။ နောက်တစ်ချက်
“အင့် ဗျိဗျိဗျစ် ဒုတ် အီးးဟီးဟီးးး နာတယ် နာတယ် အမလေးလေ ဟားးး”
မေဦး အံကြိတ်ခံ၍ မရတော့။ လီး ဒစ်ကြီးက စောက်ပတ် အတွင်းသား များအား အရှိန်ပြင်းစွာ ပွတ်တိုက်ရင်း သားအိမ်ခေါင်းသို့ သွားစောင့်သည်။ မျက်ရည်ပင် ဝဲသွား၏။ လီးကို အဆုံးထိ ပြန်ထုတ်ကာ အရှိန်ပြင်းစွာ စောင့် ထဲ့လိုက်ပြန်သည်။
“ဗျိဗျိဗျွိ ဗျစ် အူးးးးဟူးးးဟူးးး ဖြေးဖြေး လုပ်ပါရှင် အီးဟီးဟီးဟီး”
မေဦး တောင်းပန်သည်ကို foreigner နားမလည်ပေ။ နားလည်လျှင်ပင် ညှာမည့်ပုံ မပေါ်။
“အင့် ဗျိဗျိဗျိဗျိ အားးဟားးးဟားး
တစ်ချက်ခြင်း အားရပါးရ စောင့် လိုးနေရင်း 15 mins ခန့် ကြာသော် လီး အထုပ် အသွင်း သွပ်လာသည်။ မေဦးလည်း မွေ့ယာပေါ်တွင် လူးလိမ့် ခံနေရသည်။
“ဗျိဗျိဗျစ် အားးလားးလားး ဗျွတိဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အမလေးလေ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဗျိဗျိ ဇွိဇွိ အားးးဟားးဟားးး
Foreigner ၏ လီးမှ သုပ်ရည်များ မေဦး ဗိုက်ပေါ် ပန်းထုပ်လိုက်သည်။ တစ်ယောက် ဆင်းသွားသည်နှင့် နောက်တစ်ယောက် မွှေ့ယာပေါ် တက်လာကာ လီးကို စောက်ပတ်ထဲ တန်းထဲ့၍ အားရပါးရ စောင့် လိုးတော့သည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးး အမလေးလေ ဗျိဗျိဗျစ်ဗျစ် သေပါပြီ အမေရဲ့ အီးဟီးဟီးဟီး ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အူးးးဟူးးးးဟူးးးဟူးးးးး”
မေဦး ဆံပင်များ ခါရမ်းနေသည်။ ဦးတိုက်မောင်းနှင့် တစ်ယောက်က ကုတင်ပေါ်မှ လိုးပွဲကို ဘီယာ သောက်ရင်း ကြည့်နေသည်။ လိုးချက် တွေက ပြင်းထန်လှသည်။ လီးကြီး ဆွဲထုပ်လိုက်တိုင်း စောက်ပတ် အတွင်းသား ရဲရဲများ လီးတွင် ကပ်ပါလာ သကဲ့သို့ လီး ပြန် စောင့် ထဲ့လိုက်တိုင်း အတွင်းသို့ အမြုံလိုက် ကျုံ့ဝင်သွားသည်။ မေဦး၏ နာကျင်စွာ အော်ညည်းသံလေးကလည်း ရမ္မက် စိတ်ကို ပိုမို နိုးကြွစေသည်။
“ဗျိဗျိ ဗျွတ်ဗျွတ် အားးလားးလားး ဗွတ်ဗွတ် ဗျွတ်ဗျွတ် အမလေးးလေ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အူးးးဟူးးးဟူးးးဟူးး အီးးးးးးးးးးးးးးးးးး”
Foreigner နှစ်ယောက် လိုးပြီးသော် မေဦးတစ်ယောက် ကုတင်ထက်တွင် ဗိုက်ကို နှိပ်၍ လူးလှိမ့်နေသည်။
“ကဲ ချာတိတ် လေးဘက် ကုန်းလိုက်”
မေဦး လေးဘက် ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ဦးတိုက်မောင်း မေဦး ခါးအား ဖိ လိုက်ရာ ဦးခေါင်းမှာ မွှေ့ယာပေါ် ကပ်သွားပြီး ဖင်ကြီး ကော့သွားသည်။ မေဦး ဖင်အား ကားယား ခွကာ ပြဲ အာလာသော စောက်ပတ်တွင် လီးဒစ် တေ့လိုက်သည်။ ပြီးနောက် မေဦး ခါးအား လက်ဖြင့် စုံကိုင်၍ အရှိန်ပြင်းပြင်း စောင့်ထဲ့လိုပ်သည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အူးးးဟူးးဟူးးးဟူးး”
မေဦး ခေါင်းထောင်သွားကာ မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့သွာသည်။ လိုးချက်တိုင်းက သားအိမ်အား ထိမိလွန်းသဖြင့် မျက်ရည်များပင် ကျလာသည်။
“ဗျိဗျိဗျစ် ဒုတ် အီးးဟီးးဟီးးဟီးး ဗုဗု ဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ ဗျိဗျိ ဗျစ်ဗျစ် အားးလားးလားးလားး ရှီးးးးးးးးးးးးးး”
ဦးတိုက်မောင်း လိုးပြီးသော် မေဦး မွှေ့ယာပေါ် မှောက်လျှက် ကျသွားသည်။ နားထဲမှ လေများ ထွက်ကာ သတိ လစ်ခြင်သလို ဖြစ်နေပြီ။ မေဦးအား ခေတ္တ အနားပေးလိုက်သည်။ ဦးတိုက်မောင်း တို့လည်း ဘီယာ သောက်ရင်း နားလိုက်သည်။ နာရီဝက်ခန့် ကြာသော် Foreigner တစ်ယောက် မွှေ့ယာပေါ် တက်လာသည်။ မှောက်လျှက် ဖြစ်နေသော မေဦးအား ခွလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့လီးကို တံတွေး စွတ်လိုက်ပြီး မေဦး ဖင်နှစ်ခြမ်း ကို လက်ဖြင့် ဖြဲလိုက်သည်။ ပေါ်ထွက်လာသော စအိုပေါက်အား တံတွေး ထွေးချလိုက်ပြီး လီး ဒစ်ကို တေ့လိုက်သည်။ ဖင် လိုးခံရတော့မည်ကို သိသဖြင့် မေဦး လူးလည်း ထသည်။ မရတော့
“ဗျိဗျိဗွိ အားးးး နာတယ် နာတယ်”
တံတွေး စွတ်ထားသဖြင့် လီး ဒစ်က စအိုပေါက်ထဲ ဝင်သွားသည်။ ထပ် ဖိချလိုက်သည်။
“ဗျိဗျိဗျိဗျွိ အားးးး မရဘူးး မရဘူးးး အားးး”
မေဦး ငယ်သံပါအောင် အော်တော့သည်။ မေဦး ရုံးလေ လီးမှာ ဖင်ပေါက်ထဲ နှဲ့ ဝင်လေ ဖြစ်ရာ နောက်ဆုံးတွင်
“ဗလစ်တစ်တစ် ဗျစ်ဗျစ် အားးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အမလေးလေ ဖင်ကွဲပါပြီ အီးဟီးဟီးဟီး”
လီး တစ်ဆုံး ဖင်ခေါင်းထဲ ဝင်သွားပြီ။ မေဦးလည်း နာကျင်လွန်း၍ မည်ကဲ့သို့ အော်ညည်းရမည်ကိုပင် မသိတော့။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အမလေးး အမေရဲ့ ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အအအအ ဗျိဗျိ ဗျွတ်ဗျွတ် အီးဟီးဟီးဟီးဟီး”
တစ်ယောက် လိုးပြီး၍ ဖင်ထဲမှ လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သွားချိန် နောက် လီး တစ်ချောင်းက တန်း ဝင်လာသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗလွတ်ဗွတ် အားးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အီးဟီးဟီးဟီး”
မွှေ့ယာခင်းတွင် မေဦး မျက်ရည်များ ဆိုရွှဲနေပြီ။ ချက်ခြင်း အသက်ထွက် ချင်စိတ်ပင် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
“အားးး ရှီးးး ဦးတိုက်မောင်း လီးဒစ်ကို တံတွေးစွပ်ကာ မေဦး ဖင်ပေါက်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။
“ဗျိဗျိ ဗျွတ်ဗျွတ် အမလေးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အီးဟီးဟီးဟီး”
ဦးတိုက်မောင်း၏ လီးကြီး မေဦး ဖင်ခေါင်းထဲ အဆုံးထိ ဝင်သွားချိန် လီး တပ်လျှက်ပင် မေဦးအား ဆွဲမကာ သူ့ ကိုယ်ပေါ်၌ ပတ်လပ် တင်လိုက်သည်။ Foreigner တစ်ယောက်က မေဦး စောက်ပတ်အား လီး တေ့ကာ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးးးဟားးးးဟားးးး အမေရေ ဗျိဗျိ ဗျွတ်ဗျွတ် အားးးးးးးးးးးးးးးးးးး”
ဦးတိုက်မောင်းတို့ သုံးယောက် မေဦးအား ပါးစပ်၊ ဖင်နှင့် စောက်ပတ် သုံးပေါက်စလုံး ညှပ်၍ လိုးကြတော့သည်။ တနေကုန် တညလုံး မညှာတန်း အားရပါးရ အလိုးခံနေရသဖြင့် မေဦးခမျာ မိုးလင်းခါနီးတွင် အသံပင် မထွက်နိုင်တော့။ လူလည်း မျော့မျော့ ကျန်ကာ သတိပင် လစ်သလိုလို ဖြစ်နေပြီ။
ထိုနေ့က ဦးတိုက်မောင်း မေဦးအား နောက်ထပ်2သိန်း ထပ်ပေးသည်။ မေဦးလည်း ဖင်ရော စောက်ပတ်ပါ ကွဲသွားသဖြင့် တစ်ပတ်ခန့် အလုပ် နားလိုက်ရသည်။
သူသူ့အား သူမ ဘာလုပ်နေသည်ကို ပြောမပြသေးပေ။ နေမကောင်း၍ ခဏ နားသည်ဟုသာ ပြောထားသည်။
ဦးတိုက်မောင်းလည်း မေဦးကို သဘောကျသွားသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် အလိုရှိတိုင်း ခေါ်ခေါ် လိုးတော့သည်။ မေဦးလည်း ဦးတိုက်မောင်း၏ တစ်လက်ကိုင် ဖြစ်နေတော့သည်…”သူသူ” part2ဇတ်သိမ်း
သူသူ့အား ပုံမှန် အားပေးနေသော စစ်နိုင် ဆိုသည့် သူဌေးသား တစ်ယောက် ရှိသည်။ စစ်နိုင်သည် မိဘ ချမ်းသာမှု အရှိန်ဖြင့် သုံးဖြုံးနေသော လူငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူသူ သီချင်း ဆိုတိုင်း ပန်းကုံးဆွတ်၊ ဆုငွေ ပေးနေကြ ဖြစ်သည်။ စစ်နိုင် သူသူ့ကို လိုးခြင်နေပြီ။ အပြင် လိုက်ရန် ဒဲ့ မေးဖူးသည်။ သူသူက ထိုသို့ လုပ် မစားဘူးဟု ငြင်းလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။ သူသူတို့ ဆိုင်တွင် စစ်နိုင် ခေါ်၍ မလိုးဘူးသော မိန်းကလေး မရှိသလောက်ပင်။ သို့သော် မေဦးနှင့် သူသူကိုတော့ မလိုးဘူးသေးပေ။ မေဦး ကတော့ ဦးတိုက်မောင်း၏ တစ်လက်ကိုင် ဖြစ်သဖြင့် အခြားသူများနှင့် မလိုက်ပေ။ လူ ဆိုသည်မှာ မရသည့် အရာကို လိုခြင်သည့် အမျိုး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စစ်နိုင် သူသူ့အား လိုးရဖို့ အရေး အမျိုးမျိုး ကြံစည်နေသည်။ မန်နေဂျာအားလည်း မုန့်ဖိုး ပေးကာ စီစဉ်ခိုင်းသည်။ မရ။ နောက်ဆုံး မဆွေအား ချည်းကပ်တော့သည်။ မဆွေလည်း စစ်နိုင် ငွေပုံပေးသဖြင့် မရရအောင် စီစဉ်ပေးမည်ဟု ဂတိ ပေးလိုက်သည်။ တစ်ရက်တွင် သူသူ့ အား ခေါ်၍ Order လိုက်ရန် ဖြောင်းဖြသည်။ သူသူကလည်း ခေါင်းမာသည်။ ပိုက်စံ မရှိခြင်နေ၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ရင်းပြီး လုပ်ကိုင် မစားနိုင်ကြောင်း အပြက် ငြင်းသည်။ မဆွေ ခေါ်မေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူသူတစ်ယောက် State စင်ပေါ်သာ သီချင်းဆိုပြီး KTV Room ဆိုလျှင် လူရွေးပြီး ထိုင်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် မဆွေ ကလိန်စေ့ ငြမ်းစဉ်ရပြီ။ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း စစ်နိုင်အား ဆိုင်သို့ မလာခိုင်းပေ။
“သူသူရေ မနက်ဖန် နေ့လည်ပိုင်း KTV Booking တစ်ခု လက်ခံထားတယ်၊ အဲ့ဒါ ညီမ ဝင်ပေးနိုင်မလား”
“အင်း ဟုတ်တယ်၊ ညီမလေးရဲ့ ဧည့်သည်ထဲက တစ်ယောက်ဘဲ၊ By name နဲ့ လာလို့ မေးကြည့်တာ၊ ညီမလေး မဝင်နိုင်ရင် တစ်ခြား တစ်ယောက် စီစဉ်ပေးပါတဲ့”
“ဘယ်သူလည်း ဟင် မဆွေ”
“စစ်နိုင်လေ၊ ညီမ သဘောပါ”
သူသူ စဉ်းစားလိုက်သည်။ ဒီရက်ပိုင်း မဆွေလည်း order လိုက်ရန် မပြောတော့၊ စစ်နိုင်လည်း ဆိုင်မလာတာ ကြာပြီ၊ ခါတိုင်းလည်း ထိုင်နေကြ ဧည့်သည် ဖြစ်နေသဖြင့်
“ရတယ် မဆွေ၊ ညီမ ထိုင်ပါ့မယ်”
“Ok လေ၊ ဒါဆို မနက်ဖန် မနက် 10:00 နာရီ အရောက် ဆိုင်ကို လာခဲ့”
သူသူ ပြောပြီး State စင်နောက်ရှိ့ သီချင်းဆိုဖို့ အလှည့်စောင့်ရာ နေရာသို့ သွားထိုင်လိုက်သည်။ မဆွေ တစ်ချက် ပြုံးကာ ဖုန်း ခေါ်လိုက်သည်။
“Hello စစ်နိုင် မဆွေပါ၊ ဒီဘက်က ok တယ်၊ နင်သာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း စီစဉ်ပြီး မနက်ဖန် ငွေထုပ် ယူခဲ့ ok ok”
"မင်းသားလေးမို့ မှတ်ထင် ထားပါတယ်!!! သူ လိမ်တာတောင် ပုန်းကာ ဝှက်ကာရယ်!!!! ညာနေတာကို သိရဲ့သားနဲ့ကွယ်!!!"
“ဟားးးးး မိုက်တယ်ကွာ သူသူ့ အသံက ထွန်းအိန္ဒာဗိုလ် ငိုလောက်တယ် good/good/good”
“ငါလေ!!! ဖြစ်နိုင်ရင်!!!နင့်ကို ပြ!!!! ချင်တယ်!!! ခက်တာက ငါစိတ်ကလေးး မဖြစ်နိုင်သေးတာ နင်လေ!!! ရက်စက်တာ များးးးးပြီ”
သူသူ သီချင်း ဆိုလိုက်၊ ဝိုင် သောက်လိုက် လုပ်နေ၏။ ဒီနေ့မှ Spy wine က ချိုမြလွန်းနေသည်။ Spy နှစ်လုံး ကုန်သွားပြီ။ သူသူ့ မျက်လုံးတွေ ဝေဝါးနေသည်။ အခန်းထဲ ဝင်လာကာ လက်မ ထောင် ပြသော မဆွေအား သူသူ မတွေ့နိုင်တော့။
သတိရလာချိန်တွင် သူသူ့ တကိုယ်လုံး အေးစက်နေ၏။ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန် ပန်းနုရောင် မျက်နှာကျက်ကို တွေ့ရသည်။ သူမသိသော အခန်းတခန်းထဲ ရောက်နေ၏။ လူးလည်း ထသည်။ မရ။ လက်နှစ်ဖက်အား ကြိုးဖြင့် တုတ်နှောင်ခံထားရသည်။ ပြီးတော့ သူမ ကိုယ်ပေါ်တွင် အဝတ်အစားများ မရှိတော့။ ဗိုက်ပေါ်တွင် ယွစိ ယွစိ ဖြစ်နေ၏။ နံဘေးသို့ ငဲ့ ကြည့်လိုက်ရာ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း ပြုံးကြည့်နေသော စစ်နိုင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ဟင် ရှင် ရှင် ဒါ ဘာလုပ်တာလည်း”
“ငါ မင်းကို လိုးမလို့လေ၊ မင်း သတိရအောင် စောင့်နေတာ”
“ရှင် ရှင် လူယုတ်မာ၊ ကျွန်မ ဒါမျိုး လုပ်မစားဘူး ပြောထားပြီးသား၊ လွှတ် လွှတ် ကျွန်မကို အခုလွှတ်ပေး အီးဟီးဟီးဟီး”
“ငိုမနေစမ်းနဲ့ သူသူရာ၊ စိတ်ချ၊ ငါ မင်းကို အားရပါးရ လိုးပြီးရင် လွှတ်ပေးမယ်၊ ဟုတ်ပြီလား”
စစ်နိုင် သူသူ ခြေထောက် နှစ်ဖက်အား ချဲလိုက်ပြီး ပေါင်ကြားတွင် ဒူးတုတ် ထိုင်လိုက်သည်။ သူသူ ရုံးသည်။ မရ။ သူမ၏ စောက်ပတ်ပေါက်တွင် အေးစက် မာကြောသော အရာတစ်ခု လာထောက်သည်။
စစ်နိုင် သူသူ့စောက်ပတ်တွင် လီးဒစ် တေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
လီး ဒစ် ဝင်သွားသည်။ သူသူ့ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းလိုက်ကာ လီးကို ထပ်သွင်းလိုက်သည်။
“အင့် ဗျိဗျိဗျိဗျစ် အားးးး နာတယ် နာတယ် လူယုတ်မာကြီး လွှတ်လွှတ် အီးဟီးဟီးဟီးးးးး”
လီးမှာ စောက်ပတ်လေးထဲ တစ်ဝက်ခန့် ဝင်သွားပြီး ရှေ့စက် မတိုးဘဲ တခုခု တားစီးထားသလို ခံစားရသည်။ စစ်နိုင် ပြုံးလိုက်သည်။ သူ ပါကင် ဖေါက်ရပြီလေ။ လီးကို ဒစ်မြုတ်ရုံ ပြန်ထုတ်ပြီး အရှိန်ဖြင့် စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“အင့် ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ် ဒုတ် အားးးးး အမလေးးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ နာတယ် နာတယ် အီးဟီးဟီးဟီး”
လီး ဒစ်က အပျိုမှေးကို ရက်စက်စွာ ထိုးခွဲပြီး သားအိမ်ခေါင်းသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်း စောင့် ဝင်သွားသည်။ စစ်နိုင် လီးကို အဆုံးထိ ပြန် ထုတ်ကာ ခေါင်းငုံ့ ကြည့်လိုက်သည်။
“ဟားးး သူသူ မင်းက အပျို စစ်တာဘဲ”
“သေနာကြီး ငါ့ကို အခု လွှတ် အီးဟီးဟီးဟီး”
“အင့် ဗျွတ်ဗျွတ်ဗျွတ် ဗျိ အားးးဟားးး ဟားးးးးဟားးးး”
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးး အမေရဲ့ ဗျိဗျိဗျစ်ဗျစ် အီးဟီးဟီး နာတယ် နာတယ် ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အူးးးဟူးးဟူးးဟူး”
စစ်နိုင် လိုးကောင်းကောင်းဖြင့် မညှာမတာ လိုးနေသည်။ စောက်ပတ် လေးမှာ ကျဉ်းမြှောင်းလှသဖြင့် လီးအား လက်ဖြင့် စုပ်ကိုင်ထား သကဲ့သို့ ကျပ်ကျပ်လေး ဖြစ်နေရာ လိုးရတာ အရသာ ရှိလှသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဇွိဇွိ ဗျိဗျိ အင့်အင့် အင့်အင့် ဗျစ်ဗျစ် ဗျိဗျိ အားးးးးးးရှီးးးးး ဟားးးးးး စစ်နိုင်၏ သုပ်ရည် နွေးနွေးများ သူသူ့ သားအိမ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
“ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်ကွာ လိုးရတာ စီးပိုင်နေတာဘဲ”
ထိုနေ့က စစ်နိုင် သူသူ့အား နားလိုက် လိုးလိုက်ဖြင့်5ချီ ဆွဲပြီးမှ ပြန်ပို့သည်။ သူသူ့အား ပါကင် ကြေးအဖြစ် ငါးပုံး ပေးလိုက်သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်သော် သူသူ မလှုပ်နိုင် တော့။ တကိုယ်လုံး ကိုင်ရိုက်ခံရသလို ညောင်းကိုက်နေသည်။ သားအိမ်လည်း အောင့်နေ၏။ ပေါင် ဂွစုံလည်း အောင့်တောင့်တောင့် ဖြစ်ကာ လမ်းလျှောက်တိုင်း ကွတတ ဖြစ်နေသည်။ အိမ်ပေါက်တွင် အရက်သောက်နေသော အဒေါ့် ယောက်ျားနှင့် တွေ့သည်။
“ဟာ မိသူ ဒီနေ့ ပြန်တာ စောလှချည်လား”
“သမီး နေမကောင်းလို့ စောစော ပြန်လာတာ ဦးလေး၊ အဒေါ် ရော?”
“နင့် အဒေါ်တို့ ဒီတညလုံး တိုက်အသစ်ကို စလစ်ပြင် အပြီးလောင်းရမှာ”
“ဟုတ်ဟုတ် သမီး နားလိုက်ဦးမယ်”
ကွတ ကွတဖြင့် အိမ်ပေါ် တက်သွားသော သူသူ့ ဖင်ကြီးအား ကြည့်ကာ ညိုထွန်း အရက်ခွက်ကို မော့ချလိုက်သည်။ စားသောက်ဆိုင်တွင် အဆိုတော် လုပ်ကတည်းက ဒီကောင်မလေး တစ်နေ့နေ့ အလိုးခံရတော့မည်ကို ညိုထွန်း တွေးမိ၏။ ဒီနေ့ သူသူ လမ်းလျှောက်ပုံက တစ်မျိုး ဖြစ်နေပြီး အစောကြီး ပြန်လာသည်။ မျက်လုံးများ ကလည်း ငိုထားသကဲ့သို့ မို့အစ်နေ၏။ သူသူ ဒီနေ့ အလိုးခံလိုက်ရပြီလား။ ညိုထွန်း တွေးရင်း နောက်တစ်ခွက် ထပ်မော့ကာ သူသူ့ အခန်းသို့ ချောင်းကြည့်ရန် ထလိုက်သည်။
သူသူ အိပ်ယာပေါ် လှည်းအိပ်သည်။ စောက်ပတ် ကွဲသွားသဖြင့် စပ်နေရာ အိပ်၍ မရပေ။ ထို့ကြောင့် ဆရာခို ဆေးဘူး ယူကာ ကွဲသွားသော နေရာအား ဆေးသိပ်လိုက်သည်။ ထိုစဉ် လူရိပ် မြင်လိုက်၍ ခေါင်းမော့ ကြည့်လိုက်သည်။
“ဟင် ဦး ဦးညို ဘာ ဘာလာလုပ်တာလည်း”
“သမီး စောက်ပတ်ကို ဆေးလိမ်းပေးမလို့လေ ဟဲဟဲဟဲ”
“အို မလိုဘူး ရှင် ကျွန်မ အခန်းထဲက ထွက်သွား ထွက်သွား အွတ် အုအု ဝူး”
ညိုထွန်း သူသူ့အား ခုံအုပ်ကာ ပါးစပ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။
“နင် ဒီနေ့ အလိုးခံလာတယ် မလား၊ ငါလည်း နင့်ကို လိုးခြင်နေတာ ကြာပြီ”
ညိုထွန်း ပြောရင်း လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူသူ့ ထမိန်ကို ဆွဲလှန်နေသည်။ သူသူ ခေါင်းယမ်းကာ ရုံးသည်။ မရ။ ညိုထွန်း၏ သန်မာသော ခန္ဓာကိုယ်အား မဖယ်ရှားနိုင်။ ထမိန် လန်သွားသော် သူသူ့ ခြေထောက် နှစ်ဖက်အား ဆွဲကားလိုက်သည်။ ပြီးနောက် လီးကြီးကို စောက်ပတ်တွင် တေ့ကာ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“အင့် ဗွတ်ဗွတ်ဗျွတ် အူးးးးးးးးးးးး”
ညိုထွန်း၏ လှုပ်ရှားမှုက မြန်ဆန်လှသည်။ လီးကြီး စောက်ပတ်ထဲ တစ်ဝက်ခန့် ဝင်သွားပြီ။ သူသူ ရုံးကန်သော်လည်း မရပေ။
“အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗျိဗျိ အူးးဟူးးဟူးးဟူးး”
လီး တစ်ဆုံး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်သွားပြီ။ “ကဲ မိသူ၊ ငါ့လီးက မင်း စောက်ပတ်ထဲ ဝင်နေပြီ၊ နင် ရုံးနေလည်း မထူးတော့ဘူး၊ ငါ လိုးတာကို ငြိမ် ခံလိုက် ဟုတ်ပြီလား”
ညိုထွန်း သူသူ့ ပါးစပ်အား အုပ်ထားသော လက်ကို ဖယ်ကာ သူသူ့ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို လက်ဖြင့် ကိုင်၍ အားရပါးရ စောင့်လိုးတော့သည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဗျိဗျိ ဗျစ်ဗျစ် အီးဟီးဟီးဟီး ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အားးးးးးးးးးးး”
တစ်နေ့လည်လုံး စစ်နိုင်လိုးတာကို ပတ်ပတ်စပ်စပ် ခံခဲ့ရသော သူသူ တစ်ယောက် ယခုလည်း အဒေါ့် ယောက်ျား၏ မညှာမတာ လိုး စောင့်ချက်များ အောက်တွင် တကိုယ်လုံး ယိမ်းထိုးကာ ခံနေရသည်။
“အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဗျိဗျိဇွိဇွိ အ အ အ အ အားးးးးရှီးးးးးး ဟားးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်လေးကွာ ဟားးးးးး”
ညိုထွန်း သူသူ့ စောက်ပတ်ထဲ သုပ်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
ထိုနေ့ညက ညိုထွန်း သူသူ့အား သုံးချီ တိုင်တိုင် လိုး၍ အားရမှ အခန်းထဲက ထွက်သွားသည်။
“မေဦးရေ ငါ အခန်းထဲမှာ”
“နင် မနေ့က နေမကောင်းလို့ ဆိုင် မဆင်းဖြစ်တာဆို၊ အဲ့ဒါ ငါ လာကြည့်တာ”
နံဘေးတွင် ဝင်ထိုင်သော မေဦးအား ဖက်ကာ သူသူ ရှိုက်ကြီး တစ်ငင်ငင် ငိုကြွေးတော့သည်။
“သူသူ ဘာ ဘာဖြစ်လို့လည်း”
“အီးဟီးဟီးဟီး မေဦးရယ် ငါ့ ငါ့ ဘဝ ပျက်စီးသွားပြီဟ”
“ဘာဖြစ်တာလည်း သူသူရယ်၊ မထိပ်သာ မလန့်သာ၊ ငါ့ကို ရှင်းရှင်း ပြောစမ်းပါ”
“အီးဟီးဟီးဟီး မနေ့က စစ်နိုင် ငါ့ကို ငါ့ကို ———————————-“
သူသူ မနေ့က အကြောင်းတွေ မေဦးအား ရှိုက်ငိုရင်း ပြောပြသည်။ မေဦး သူသူ့ ကျောပြင်အား ပွတ်သပ် ချော့မြူရင်း
“သြော် သူငယ်ချင်းရယ်၊ ငါလည်း နင်နဲ့ ဘဝတူပါဘဲဟာ”
“မေဦးရေ ဧည့်သည်က section ထိုင်မယ်တဲ့ဟေ့”
သူသူနှင့် စကားပြောနေချိန် waiter တစ်ယောက် လှမ်းပြောသဖြင့် ကြည့်လိုက်ရာ
ဟုတ်သည်။ ဦးတိုက်မောင်းနှင့် Foreigner နှစ်ဦးအပြင် နောက်တစ်ဦး ထပ်ပါလာသည်။
“ဒီတာခါ တစ်ယောက် ထပ်ပါလာတယ်၊ သူသူ ငါသွားလိုက်ဦးမယ်”
“ကောင်မ သူ့ဘိုးတော်လာလို့ ပြုံးနေတာဘဲ”
မေဦး KTV ခန်းထဲ ဝင်သွားစဉ် သူသူလည်း သီချင်းဆိုရန် အလှည့်ကျသဖြင့် State စင်ပေါ် တက်ခဲ့သည်။ သူသူ သီချင်းဆိုပြီးသော် မေဦး ရောက်လာကာ
“သူသူရေ၊ ဦးနဲ့ ပါလာတဲ့ တစ်ယောက်က lady ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ အဲ့ဒါ နင် ထိုင်မလား”
“သဘောကောင်း ရေလျှံထဲကဘဲ ဟ”
သူသူ နှင့် မေဦး ဧည့်သည်များအား ဘီယာ ငှဲ့ပေး၊ အမြည်း ခွံ့ပေး လုပ်နေကြသည်။ သူမတို့လည်း spy wine သောက်ကြသည်။ Foreigner နှစ်ယောက်ကတော့ နိုင်ငံခြား သီချင်း ဆိုရင်း က နေကြသည်။ ဦးတိုက်မောင်းနှင့် ပါလာသော တစ်ယောက်က သူသူနှင့် မေဦးအား ကြည့်ကာ ဦးတိုက်မောင်းထံ ကပ်၍ တီးတိုး ပြောသည်။ ဦးတိုက်မောင်း ပြုံး၍ ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ မေဦးထံ တီးတိုး ကပ်ပြောသည်။ မေဦးလည်း ခေါင်းငြိမ့်ကာ သူသူ့အား လက်ကုပ်၍ အပြင်သို့ ခေတ္တ ခေါ်ထုပ်ခဲ့သည်။
“မနက်ဖန် ဦးက order လိုက်ဖို့ ခေါ်နေလို့”
“ဒါများ ဘာ ဆန်းလို့လည်း၊ နင် လိုက်နေကြ ဟာကို”
“အခုဟာက ဟို ဘဲကြီးက နင့်ကို ခေါ်ချင်လို့တဲ့၊ နင် အစဉ်ပြေရင် ငါတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ခေါ်မယ်တဲ့၊ နင် မလိုက်ရင်တော့ ငါ မနက်ဖန်4by 1 ဆွဲရလိမ့်မယ်”
သူသူ ခေတ္တ စဉ်းစားကာ
“ဆိုင်မှာတော့3ပုံးစီပေါ့၊ ဟို ရောက်ရင်2ပုံးစီ ထပ်ရမှာ”
“ဟယ်5ပုံး ဆိုရင် လိုက်မယ် ဟာ”
“သေခြာတယ်နော် သူသူ၊ ဟိုရောက်ရင် ဖင် ဖွင့်ခံရမှာ ဟ၊ ပြီးတော့ အပေါက်စုံ ညှပ်ချကြမှာ”
“ဝက် ဖြစ်မှတော့ ချီး လည်း မရွံတော့ဘူး မေဦးရေ”
5 star hotel ကြီး၏ အခန်းကျယ်ကြီး တခုတွင်
ကြမ်းပြင်၌ ကြီးမားသော မွှေ့ယာတခု ခင်းထားသည်။ စားပွဲဝိုင်းတွင် ဘီယာ ပုလင်းနှင့် အမြည်းများ အပြည့်။ မနက် 9:00 am ကတည်းက taxi ဖြင့် သူသူတို့ ရောက်နေကြသည်။ သူသူက ဦးမင်းကို၏ ရင်ခွင်ထဲ မှီနွဲ့ကာ ဘီယာ သောက်ရင်း စကား ပြောနေကြသည်။ မေဦးကတော့ foreigner နှစ်ယောက် ကြားတွင် ထိုင်နေသည်။ ဘီယာ1 လုံးစီ သောက်ပြီးသော် စကားသံများ ငြိမ်သွားကာ မေဦးမှာ foreigner နှစ်ဦး၏ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်မှုကို ခံနေရသည်။ သူသူလည်း ဦးမင်းကို၏ နမ်းရှိုက်မှုကို ပြန်လည် နမ်းရင်း ဦးတိုက်မောင်း နို့ကိုင်နေသည်ကို ခံနေရသည်။ မေဦး အဝတ်များ ကွာကျ ကုန်ပြီ။ Foreigner တစ်ယောက်က မေဦး စောက်ပတ်အား ကုန်း လျှက်နေပြီး ကျန်တစ်ယောက်၏ လီးကို မေဦးက စုပ်ပေးနေသည်။
“ပလပ် ပလပ် ရှလွတ် အားးးဟားးဟား ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် Oh!!!!ရှီးးးး ” Foreigner နှစ်ဦး၏ လီးကို ကြည့်ကာ မေဦး မျက်လုံး ပြူးသွားသည်။ စစ်နိုင်နှင့် ဦးညိုထွန်း လီးထက် ကြီးသည်။ ဒါကြီးတွေနှင့် ဖင်ဖွင့်ခံရလျှင်၊ ညှပ် လိုးမည် ဆိုလျှင် ခံနိုင်ပါ့မလားဟု တွေးမိသည်။ မေဦးကို ကြည့်လိုက်တော့ အေးဆေး။ စောက်ပတ် လျှက်နေသော foreigner မတ်တပ် ရပ်ကာ မေဦး ပါးစပ်နား လီးကို တေ့ပေးလိုက်သည်။
မေဦး၏ လီးစုပ်ချက်များတွင် foreigner နှစ်ဦး သာယာနေကြသည်။ ဦးတိုက်မောင်း သူသူ့ ထမိန်အား ဆွဲချွတ်ကာ အောက်ခံ ဘောင်းဘီထဲ လက်နှိုက်ပြီး စောက်ပတ်လေးကို မွှေနေသည်။ ဦးမင်းကိုကလည်း သူသူ့ အင်္ကျီအား ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး နို့စို့နေသည်။ သူသူ နို့စို့ခံ၊ စောက်ပတ် အနှိုက်ခံရင်း မေဦး တို့အား ကြည့်နေ၏။
နို့စို့ခံ၊ စောက်စိ ကလိခံနေရသဖြင့် သူသူ့ကိုယ်လေး တွန့်တွန့်သွားသည်။ မေဦး မွှေ့ယာပေါ် လေးဘက် ကုန်းထားသည်။ Foreigner တစ်ယောက်က မေဦး လေးဘက် ကုန်းထား၍ နောက်သို့ ပြူထွက်နေသော မေဦး စောက်ပတ်ကို လီးဒစ်တေ့လိုက်သည်။ ပြီးနောက် မေဦး ခါးကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ အားရပါးရ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“အင့် ဗျိဗျိဗျစ် ဒုတ် အူးးးးးးးးးး”
မေဦး မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ တစ်ချက်ထဲနှင့် လီးတစ်ဆုံး စောင့်သွင်းခံလိုက်ရသဖြင့် သားအိမ် အောင့်သွားသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဖတ်ဖတ် အင့်အင့် အားးးး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဗျိဗျိဇွိဇွိ အအအအ”
လီးမှာ စောက်ပတ်ထဲ nonstop ဝင်ထွက်နေသည်။ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် မေဦး ဆံပင်များ ခါရမ်းကာ အံကြိတ် ခံနေရသည်။ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် အားရပါးရ စောင့်ပြီး ထိုတစ်ယောက်က သူလီးကို မေဦး စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုပ်ကာ မေဦး မျက်နှာရှေ့ သွားရပ်သည်။ စောက်ရည်များ ပေကျံနေသော လီးကို မေဦး စုပ်ပေးနေသည်။ ထိုစဉ် နောက် လီးတစ်ချောင်းကို စောက်ပတ်ထဲ အရှိန်ပြင်းစွာ စောင့်သွင်းခြင်း ခံလိုက်ရသည်။
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် Arrr အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗုဗု အုအု အွတ်အွတ် ဗျိဗျိ ဗျစ်ဗျစ် အအအအ”
Foreigner နှစ်ယောက် မေဦးအား စောက်ပတ် လိုးလိုက် လီးစုပ်ခိုင်းလိုက် လုပ်နေသည်ကို ကြည့်ရင်း သူသူ တစ်ယောက် စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ထွက်လာကာ
“အအအ ကျွတ် ဟားးးး ရှီးးးးးး”
နို့စို့နေသော ဦးမင်းကို ခေါင်းအား လက်ဖြင့် ကိုင်ဆွမိသည်။ မေဦးတို့ ပုံစံပြောင်း သွားပြီ။ Foreigner တစ်ယောက်က မွှေ့ယာပေါ် ပတ်လပ် လှန် အိပ်လိုက်ပြီး ၄င်း၏ ထောင် မတ်နေသော လီးကြီးအပေါ် မေဦး တက်ခွ၍ ဖိ ထိုင်ချလိုက်သည်။
“ဇှိဇှိဇှိ ဗွိ အားးးးးး”
Foreigner ၏လီးတစ်ဆုံး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်သွားသော် မေဦး အပေါ်မှ ညှောင့်လိုး လိုးနေသည်။
“ပြွတ်ပြွတ် ဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ ရှီးးးး”
Foreigner တစ်ယောက်၏ လီးကို စုပ်ပေးနေရသေးသည်။ မေဦး တစ်ယောက် လီးစုပ်ရင်း စကောဝိုင်းလိုက်၊ မြင်းစီးလိုက် လုပ်နေရာ 15 mins ခန့် အကြာတွင်
“ပြွတ်ပြွတ် ဇွိဇွိ အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျိဗျိ ဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ အားးးးးဟားးးး”
မေဦးဖင်လေး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်ကာ တစ်ချီပြီးသွားသည်။ လီးစုပ်ခံနေသော foreigner က မေဦး နောက်သို့ သွားကာ စအိုပေါက်ကို တံတွေးနှင့် စွတ်လိုက်သည်။ အောက်က တစ်ယောက်က မေဦးကို သိုင်းဖက်ထားသည်။ လီးဒစ်အား စအိုပေါက်တွင်တေ့ကာ သွင်းလိုက်သည်။
လီးဒစ် ဝင်သွားပြီ။ မေဦး မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့နေ၏။ မေဦး ခါးကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ စောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“ဗျိဗျိ ဗျစ်ဗျစ် အူးးးဟူးးးဟူးးးး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်”
မေဦး ကြိတ်မှိတ် အော်ညည်းနေသည်။ လီးတစ်ဝက်ခန့် ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်သွားသော် အားပြင်းပြင်းဖြင့် စောင့်သွင်း ခံလိုက်ရသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးလားးးလားး အမလေးလေ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်”
လီးတစ်ဆုံး ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်သွားသော် အထက်အောက် နှစ်ယောက်သား မေဦးအား မညှာတမ်း ညှပ် လိုးကြသည်။ မေဦးလည်း အသံကုန် အော်ဟစ် ညည်းတွားနေသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးးးး ဗျိဗျိဇွိဇွိ အူးးးဟူးးးးဟူးးးးးးးး”
ဦးတိုက်မောင်း၏ လီး မေဦး မျက်နှာနား ကပ်လာသဖြင့် မေဦး အလိုက်သင့် ပါးစပ်ဟပေးလိုက်သည်။ လီးကြီး ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာသည်။ မေဦး လီးကို စုပ်ရင်း မြိုချနေရာ လီးမှာ အာခေါင်ထိ တိုးလာသည်။ ဦးတိုက်မောင်း မေဦးပါးစပ်ထဲ လီးကို သွင်းလိုက်ထုပ်လိုက်ဖြင့် လိုးနေသည်။ ဦးတိုက်မောင်းက လီးကို ပါးစပ်ထဲ အဆုံးထိ ထဲ့ထားကာ မေဦး မျက်နှာ အား ဆီးခုံနှင့် ဖိကပ်ထားစဉ် ဖင်နှင့် စောက်ပတ်ထဲ ဝင် ထွက်နေသော လီး နှစ်ချောင်း အရှိန် ပြင်းလာသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဘွတ်ဘွတ် အွတ်အွတ် အုအု ဗျိဗျိဇွိဗျစ် အုအုအုဟု”
မေဦး မျက်နှာ နီမြန်းနေပြီ။ သူသူလည်း မေဦးအား ဝိုင်း လိုးနေသည်ကို ကြည့်လျှက် ဦးမင်းကို စောက်စိ ပွတ်ပေးသည်ကို feel ဖြစ်ကာ ခါးလေး ကော့ကော့ပြီး တချီ ပြီးသွားသည်။
“အာဟားးးးး ရှီးးးးးး ဟားးးးးး”
ဦးမင်းကို သူသူ့အား မွှေ့ယာပေါ် ပွေ့ တင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ဘောင်းဘီ ချွတ်၍ သူသူ့ ပေါင်ကြား ဒူးတုတ် ထိုင်လိုက်သည်။ သူသူ ဦးမင်းကို၏ လီးကို ကြည့်ကာ မျက်လုံး ပြူးသွားသည်။ လေးယောက်စလုံး၏ လီးများက သူမ လက်ဖျံလောက် တုတ်ကာ 7′ ခန့် ရှည်လျှားသည်။ တွေး နေရင်းပင် လီးဒစ်က စောက်ပတ် အဝတွင် လာတေ့သည်။ တချီ ပြီးထား၍ အရည်များ ရွှဲနေသော စောက်ပတ်ထဲ လီးဒစ်ကြီး လျှောကနဲ ဝင်သွားသည်။
“ဇှိ ဇှိဗွိ အ ဟားးးး”
သူသူ ဦးမင်းကို၏ လက်မောင်းကို စုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ဦးမင်းကို လက်မဖြင့် သူသူ စောက်စိအား ပွတ် ခါ ရင်း လီးကို တစ်ရစ်ခြင်း သွင်းသည်။ “ဇွိ ဇွိ ပလစ် ပျစ် ပျစ် အအအအ”
ဦးမင်းကို၏ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် လီး တစ်ဆုံး ဝင်သွားသော်လည်း နာကျင်မှု မရှိဘဲ ခံ၍ ကောင်းနေသည်။ လီးအား စောက်ပတ်အတွင်း ကပ်လိုး လိုးနေရာ5mins ခန့် ကြာသော် သူသူ့ ဖင်ကြီး ကော့ကော့လာသည်။ ဦးမင်းကို သူသူ့ မျက်နှာနားတွင် လက်ထောက်ကာ အားရပါးရ လိုးစောင့်တော့သည်။
“အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျစ်ဗျစ် ဇွိဇွိ အအအအ ဗျွတ်ဗျွတ် စွစ်ဖေါက် အားးး ရှီးးးး အအ စောင့်စောင့် အအအအ အားးးးးဟားးးးးရှီးးးးး အားးးးးးး”
သူသူ ဒုတိယ အချီ ပြီးသွားစဉ် ဦးမင်းကိုလည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူသူ့ ဗိုက်ပေါ် သုပ်ရည်များ ပန်းထုပ်လိုက်သည်။ ဦးမင်းကို ပြီးသွားသည်နှင့် foreigner က မေဦး ဖင်ထဲမှ လီးကို ထုပ်ကာ သူသူ့ ပေါင်ကြား ဝင်၍ စောက်ပတ်ထဲ လီး ထိုးထဲ့လိုက်သည်။
“ဘုဘု ဘူ အူးးးး ဗွိဗွိ ဇှိဇှိ အားးးးးးးးးးး”
လီးမှာ အရှိန်ဖြင့် ဝင်လာ၍ သူသူ သားအိမ် အောင့်သွားသည်။ စောက်ပတ်လေးက ကျဉ်းမြောင်းပြီး စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှသဖြင့် foreigner မှာ အားရပါးရ လိုးစောင့်နေရာ သူသူ အံကြိတ် ခံနေရသည်။
“ဗွတ်ဗွတ် ဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ ဇွိဇွိ ဗျစ်ဗျစ် အိုးးးးးyes အအအအ Haa Shii yes good haaaaa”
သူသူ့အား လိုးနေသော တစ်ယောက် ပြီးသွားပြန်သော် မေဦးအား လိုးနေသည့် Foreigner က သူသူ့ဘက် ပြောင်းလာသည်။ သူသူ့အား လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး လီးကို အရှိန်ဖြင့် လိုးထဲ့လိုက်သည်။
“အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးး အမလေးးး အီးးးးးး”
လီးဒစ်မှာ စောက်ပတ် အတွင်းသားများကို ရက်စက်စွာ ပွတ်တိုက်ရင်း သားအိမ်အား အရှိန် ပြင်းပြင်း ဝင်စောင့်သဖြင့် မေဦး မျက်ရည်ပင် ဝဲသွားသည်။ ခါးကို စုံကိုင်၍ စောင့်လိုးနေရာ သူသူ့ တကိုယ်လုံး ယိမ်းထိုးနေသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗုဗု အင့်အင့်အင့် အ ဗျစ်ဗျစ် ဇွိဇွိ အအအအ အားးးးရှီးးးးးးးး”
Foreigner ပြီးသွားချိန် သူသူလည်း မွှေ့ယာပေါ် မှောက်လျှက် ထိုးကျသွားသည်။ ဦးတိုက်မောင်း မှောက်လျှက် လှဲနေသော သူသူ့ အပေါ် ခွလိုက်သည်။ သူသူ့ ဖင်အား လက်ဖြင့် ဖြဲကာ စအိုပေါက်ကို တံတွေး စွတ်လိုက်သည်။ သားအိမ် အောင့်ကာ နုံးခွေနေသော သူသူတစ်ယောက် ဖင် အလိုးခံရတော့မည် သိသဖြင့် ငိုခြင်စိတ် ပေါက်သွားသည်။ လီးဒစ်ကို ဖင်ပေါက်တွင် တေ့ကာ ဖိထိုးလိုက်သည်။
“ဇှိဇှိ ဗစြွ အားးးဟားးးဟားးး”
သူသူ ခေါင်းမော့ကာ မေးကြောများ ထောင်သွားသည်။ ဖင်ထဲ လီးကြီး ကျပ်သိပ်စွာ ဝင်လာသည်။
“အိအိ အအ အားးးးး”
လီးတစ်ဝက်ခန့် ဝင်သွားသော် ဦးတိုက်မောင်း အားဖြင့် စောင့်ထဲ့လိုက်သည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ အားးး နာတယ် နာတယ် အီးဟီးဟီးးးဟီးးးးးး”
သူသူ နာကျင်မှုကို လုံးဝ မခံနိုင်တော့။ သူသူ့ အော်ညည်းသံကြောင့် ဦးတိုက်မောင်း စောင့်ချက် ပို ပြင်းထန်လာသည်။
“အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် အားးး အမေရဲ့ ဗျိဗျိ ဇွိဇွိ အူးးးးဟူးးးးဟူးးး သေပါပြီတော့”
ဦးတိုက်မောင်း လိုးပြီးသွားသော် သူသူ တစ်ယောက် အသံပင် မထွက်နိုင်တော့။ ဖင်လည်း ကွဲကာ ကျိမ်းစပ်နေပြီ။
သူသူနှင့် မေဦးခမျာ ဦးတိုက်မောင်းတို့ လေးယောက် နားလိုက် လိုးလိုက်ဖြင့် ပါးစပ်၊ ဖင်၊ စောက်ပတ် သုံးပေါက်လုံး ညှပ်လိုး လိုးခံခဲ့ရသည်။
နှစ်ယောက်သား မျော့မျော့လေးသာ ကျန်တော့သည်။ ပါးစပ်ထဲလည်း သုပ်ရည် ညှီနံ့များ လှိုင်လို့။
နောက်ပိုင်းတွင် ဦးမင်းကို တစ်ယောက် သူသူ့အား မကြာခဏ ခေါ်၍ လိုးသည်။ သူသူ၏ ညုတုတု ချွဲနွဲ့ ပြောဆိုမှုများ၌ သာယာနေပြီ။ မေဦး မှာလည်း ဦးတိုက်မောင်း၏ ပင်တိုင် အသုံးတော်ခံ မယားဖြစ်သွားသည်။ ဦးတိုက်မောင်းက မေဦးအား တိုက်ခန်း တစ်ခန်း ဝယ်ပေးထားကာ အလိုရှိတိုင်း ခေါ်လိုးသည်။ ရံဖန်ရံခါ ဦးတိုက်မောင်း၏ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ လာတိုင်း မေဦးက ဒိုင်ခံ အလိုးခံရသည်။ သို့သော် မေဦးမှာ လူတကာ၏ အလိုးခံ ဘဝထက် သာသဖြင့် ကျေနပ်သည်။
“ဦးက လွဲပြီး သူလေး တခြားသူတွေနဲ့ မလိုက်ရဘူးနော်”
“ဦးရယ် သူသူတို့က မရှိလို့ လုပ်စားနေရတာလေ”
“ဦး သူသူ့အတွက် စီစဉ်ထားတာ တစ်ခုရှိတယ်”
“ပြောသေးဘူး သူလေး ဦးကို ပြုစုပြီးမှ”
“အဟွန့် ဦးက အရမ်းကဲတာဘဲ”
ဦးမင်းကို၏ လီးဒစ်အား နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိစုပ်ကာ လျှာဖြင့် ကလိလိုက်သည်။ လီးအား ပါးစပ်ဖြင့် ငုံစုပ်ပေးလိုက်ရာ
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အိုးးရှီးးး ကောင်းလိုက်တာကွာ ဟားးးး”
10 mins ခန့် လီးစုပ်ပေးလိုက်သော်
“တော်ပြီ သူလေးရေ၊ ဦး သူလေး ပါးစပ်ထဲ ပြီးသွားလိမ့်မယ်”
သူသူ ဘောင်းဘီ ချွတ်ကာ ဦးမင်းကို ပေါ် ခွ ထိုင်လိုက်သည်။ လီးကို လက်ဖြင့် ကိုင်၍ စောက်ပတ်တွင် တေ့ကာ ဖိထိုင်ချလိုက်သည်။
လီး တစ်ဆုံး ဝင်သွားသည်နှင့် ဦးမင်းကို ပုခုံးအား လက်ဖြင့် ကိုင်၍ ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်းတော့သည်။
“အအအအ ဟားးး ကောင်းလိုက်တာ ကွာ ရှီးးး”
ဦးမင်းကို၏ ဆီးခုံနှင့် စောက်စိ ဖိကပ်ကာ ဖင်ကြီးကို ညှောင့်လိုး လိုးနေရာ
“ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် အအအအ ပြွတ်ပြွတ် ပျစ်ပျစ် အအအအ ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ် အအအအ အားးးးးရှီးးးးးးး ဟားးးးးးးးးး”
သူသူ ဦးမင်းကိုအား ဖတ်ထားလျှက် ဖင်ကြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကာ ပြီးသွားသည်။ ဦးမင်းကိုလည်း သူသူ၏ နူးညံ့သော စောက်ပတ်လေးထဲ သုပ်များ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
သူသူတစ်ယောက် ဦးမင်းကို ပြောသော အကြောင်းအရာများကို တွေးရင်း အိပ်ယာထဲတွင် လူးလှိမ့်နေသည်။ ဦးမင်းကိုက သူသူ့အား အလှပြင် သင်တန်း တက်ရန် တိုက်တွန်းသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထောက်ပံ့မည်။ ပညာ တက်သွားလျှင် ခြံဝန်း ဝယ်ပေးကာ ဆိုင်ဖွင့်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးမင်းကို၏ မိန်းမ/ မိသားစုနှင့် ပြဿနာ ဖြစ်မည်စိုး၍ သူသူ ငြင်းသည်။ သူ့ မိသားစုနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်မပူရန်နှင့်၊ သူ့ မိန်းမက ပိုက်စံ ရှာပေးနေရင် သူ ဘာလုပ်လုပ် ခွင့်ပြုထားကြောင်း၊ လုပ်ငန်း အခြို့ကိုလည်း သားအား လွှဲထားပေးသဖြင့် စိတ်မပူရန် ပြောကြားသည်။ အဓိက ကတော့ ဦးမင်းကိုအား ပြုစုပေးလျှင် ပြီးပြီ ဟု ပြောသည်။ သူသူ စဉ်းစားပါရစေဟု ပြောထားခဲ့သည်။ ယခု ကိစ္စက sponsor ပေးသည်ထက် သူ၏ အငယ် မယားအဖြစ် နေထိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ မနက်ကျလျှင် မေဦးနှင့် တိုင်ပင်ရမည်။ သူသူ ခေါင်းဦးကို ဖက်ကာ မှောက်အိပ်နေ၏။ အခန်းထဲ လူဝင်လာသဖြင့် လူးလည်း ထသည်။ သူမ ကိုယ်ပေါ် ဖိထိုင် ခံလိုက်ရသည်။
“အာ ဦးညို ဘာလုပ်တာလည်း ဖယ် ဖယ်”
“ငါ နင့်ကို မလိုးရတာ ကြာလို့၊ အခုည လိုးမလို့လေ”
“ဦးညို ဖယ်နော်၊ ကျွန်မ ဒေါ်လေး ကြားအောင် အော်လိုက်မှာ အ အ”
သူသူ ဆံပင် စောင့်ဆွဲ ခံလိုက်ရသည်။
“နင့် ဒေါ်လေး မရှိဘူး၊ ရှိလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး”
ဦးညိုထွန်း ပြောရင်း သူသူ့ ထမိန်ကို ဆွဲ လှန်လိုက်သည်။ အိမ်နေရင်းမို့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထား။
“ဟားးး ကြည့်စမ်း နင့်ဖင်ကြီးက ဟိုလူလိုး ဒီလူလိုးနဲ့ ထွားလာလိုက်တာ ဖြန်းဖြန်းဖြန်း အ အ အားးးးးး”
ဦးညိုထွန်း သူသူ့ ဖင်အား ဘယ်ပြန် ညာပြန် ရိုက်လိုက်ရာ သူသူ ဖင် ကော့သွားသည်။ ရုံးနေလည်း အလိုးခံ ရမည့် အတူမို့ သူသူ ငြိမ်နေလိုက်သည်။
ဦးညိုထွန်း သူသူ့ ဖင်နှစ်ခြမ်းအား လက်ဖြင့် ဖြဲကာ စအိုပေါက်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်သည်။
“ထွီ အ ဟာ ဦးညို ဖင်ကိုတော့ မလုပ် မလုပ်ပါနဲ့၊ ဗျိဗျိဇွိဗျစ် အအအ အားးးး”
ဦးညိုထွန်း လီးကြီး ဖင်ထဲ ညှာတာမှု ကင်းစွာ တိုးဝင်လာသည်။ သူသူ့ ခါးအား လက်ဖြင့်ဖိထားကာ အားရပါးရ လိုးနေသည်။
“ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဗျိဗျိ ဇွိဇွိ အအ ဖြေးဖြေး အအ နာတယ် နာတယ် အားးးးး”
လီးကြီး အဝင်အထွက် ကြမ်းလှသည်။ လီးဒစ် ဝင်လာတိုင်း ဖင်ထဲ အောင့်သွားကာ တစ်စို့ကြီး ခံစားရသကဲ့သို့ ပြန်ထွက်သွားတိုင်း ဟာတာတာကြီး ဖြစ် ကျန်ခဲ့သည်။
ဦးညိုထွန်း စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လာသည်။ သူသူ ခေါင်းအုံးအား သွားဖြင့် ကိုက်ကာ ဖင်လိုး ခံနေရသည်။
“အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဇွိဇွိဗျစ်ဗျစ် အအ နာတယ် အအ အအ ဗျွတ်ဗျွတ်ဗုဗု အအအအ ဟားးးးး ရှီးးးးးး အားးးးးးး”
သူသူ့ဖင်ထဲ ချွဲကျိကျိ သုပ်ရည်များ ဝင်သွားသည်။
“ဟားးးးးး သူသူရာ နင့် ဖင်လေးက လိုးရတာ စီးပိုင်နေတာဘဲ ဟားးးးးးး”
သူသူ ဦးမင်းကို၏ အစီအစဉ်အား သဘောတူရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အိမ်မှာနေလျှင် အဒေါ့် ယောက်ျားက အဒေါ် လစ်လျှင် လစ်သလို တက်တက် လိုးသည့်ဒဏ်ကို ရည်ရှည် မခံနိုင်တော့။ သူမကြောင့် အဒေါ် လင်မယား ကွဲမှာကို မလိုလားပေ။ ထို့ကြောင့် မေဦးနှင့် တိုင်ပင်ကာ အဆောင်သို့ ပြောင်းနေသည်။ မေဦး ကတော့ စဉ်တင် အဆိုတော် မလုပ်တော့ဘဲ ဦးတိုက်မောင်း ဝယ်ပေးသော တိုက်ခန်းတွင် ပြောင်းနေကာ ဦးတိုက်မောင်း၏ ပင်တိုင် အဖြစ် ဘဝကို ရပ်တည်လိုက်သည်။ မောင်လေးနှင့် ညီမလေးကို ရွာရှိ ဆွေမျိုးများထံ ပို့ကာ စားရိတ် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သူသူလည်း နေ့ခင်း အလှပြင် သင်တန်း တက်လိုက်၊ ညဘက် သီချင်း ဆိုလိုက်၊ ဦးမင်းကို အား ပြုစုလိုက် လုပ်နေသည်။ အဆောင်နေစဉ် ရင်းနှီးခဲ့သော မိုးကုတ်သူလေး မေရီ့ ကိစ္စအား ကူညီပေးပြီးနောက်တွင် ဦးမင်းကို ဝယ်ပေးသော ခြံ၌ အိမ်ဆောက်ပြီး Beauty salon တခု ဖွင့်၍ လုပ်ကိုင်နေသည်။ ဦးမင်းကို အလိုရှိလျှင် ပြုစုပေးသော မယားငယ်လေး တစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ ပေါ့။